Oonodoli bezesondo bamantombazana bendalo | Odola iPremium yeNdalo efana noDoli wothando ngoku
Unodoli weNtombaza weNdalo oPhezulu oPhila ngokuPhila ngesondo kuMadoda nabasetyhini
Yakha kwaye wenze ngokwezifiso zakho Oonodoli bezesondo bendalo obuyinyani. Eyona Silicone exabiso liphantsi kunye ne-TPE yoNodoli boThando lokwenyani bayathengiswa. Oonodoli bethu bezendalo bezesondo bezendalo beNgqokelela yeNgcaciso yeNdalo yeNdalo banokukunika eyona mvakalelo yokwenyani.
I-157CM ethandekayo yoMfundi B yeNdebe yeBele ye-TPE yeDoll yeSimona
UBonnie-Ubungakanani bobomi boLuthando lokwenyani lwe-148cm enkulu ye-TPE yeDoll yeDoll + ye-Masturbator + yangaphantsi e-Sexy + Washer
I-Urdolls ininzi yendalo yoonodoli bezesondo
Njengoko ubona, zonke iimodeli ezinodoli zesondo ezihle kakhulu apha zezona zendalo, la mantombazana abonisa i-skinny, ama-tits amancinci, ama-boobs amakhulu kunye noonodoli bee-esile ezinkulu. Unodoli wesondo oyifunayo unokwenziwa ngokwezifiso ngokuthanda kwakho. I-Urdolls 'yeyona yendalo yenyani idilesi yesilicone yesini, yonke i-Natural Girl ibonakala iyinyani kakhulu, ivakalelwa njengentombazana engummelwane wakho, yendalo kunye nobubele.
Uninzi lweNdalo Oonodoli bezesondo bokwenene bayathengiswa
The unodoli wesondo wendalo wesikhumba ingqokelela inelona nani likhulu leentlobo ezahlukeneyo ze unodoli wokwenene. Kukho amabhinqa ablond aneegophe ezigqibeleleyo, amantombazana aseMerika aneenwele ezimnyama zenkomo, abafazi abaqolileyo abanamabele amakhulu kunye neempundu ezinkulu, amantombazana amancinci anesifuba esisicaba kwisitayile se-anime, kunye noonodoli baseAsia abanesikhumba esimnandi. Sineminyaka emininzi yamava kwimveliso yoonodoli bezesondo, kwaye kukho iintlobo ezininzi zoonodoli bezesondo ukukhetha kuzo. Zonke zenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu ukunika ulusu lokwenene luziva, lungenabungozi emzimbeni wakho, olungenabuthi, lula ukugcina kunye nokucoca.Ukuba ufuna ulusu lwendalo olukhangayo. ubungakanani ubomi intombazana yendalo ngesondo unodoli, ezi zigophe ngokugqibeleleyo ngokwesayizi ye-surreal oonodoli besondo be-tpe ziyafumaneka, nganye inomgangatho ophezulu kunye nexabiso elifikelelekayo. Lo ngumbala odume kakhulu, kwaye sihlala sizisa izitayile ezintsha ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zabalandeli abaninzi.